ထိုင်းမှတ်ပုံတင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်းမှတ်ပုံတင်ကတ် နမူနာပုံ (ပဉ္စမမျိုးဆက် )
စာရွက်စာတမ်းအမျိုးစား မှတ်ပုံတင်(Identity card)
သက်တမ်းကုန် ၆ နှစ် (အသက် ၇၀ ထက် ကျော်လွန်သွားပါက ကတ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်း မရှိတော့)
ထိုင်းမှတ်ပုံတင် (ထိုင်း: ums ประจำตัวประชาชนไทย) သည် အသက် ၇ နှစ်မှ ၇၀ ကြား ထိုင်းနိုင်ငံသားများကို ထုတ်ပေးသော အစိုးရ တရားဝင် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ဖြစ်သည်။ ပလဲ့ ဖီဘွန်ဆုန်ခရမ် (Plaek Phibunsongkram) ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သော ၁၉၄၃ တွင် မှတ်ပုံတင်စနစ် စတင်ကျင့်သုံးသည်။ အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို မူလက ၁၆ နှစ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၁၉၈၃ ၌ ၁၅ သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ တွင် ၇ သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
ထိုကတ်ကို ကိုင်ဆောင်သူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများ ရယူနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။ အခြား သီးသန့် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း လျှောက်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေစာရင်း အကောင့်ဖွင့်ခြင်း စသည်တို့တွင် သက်တမ်းရှိ မှတ်ပုံတင်ကို ပြသရန် လိုအပ်သည်။ ခိုင်လုံသော အကြောင်းမရှိဘဲ ကတ်ကို မပြသနိုင်လျှင် ဘတ် ၂၀၀ အထိ ဒဏ်တပ်ခံရနိုင်သည်။
↑ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง။ .htm วิวัฒนาการบัตรประจำตัว ประชาชน။
↑ "ws: ราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 6) W.A. bécl"။ /PDF/2542/A/011/1.PDF 11a116, Statute language=Thai of တန်ဖိုး |url= စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ) (PDF)။ p. 1-6။ 2017-03-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Missing pipe in: |title= (အကူအညီ)[လင့်ခ်သေ]
↑ ၃.၀ ၃.၁ 570 กิจจานุเบกษา, ,/PDF/2554/A/034/64.PDF W58570UVJG บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔[လင့်ခ်သေ], เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ก, ๑๑ W9u7n1lc&& (National Identification Card amendment act, 2011)
↑ 576iany เบกษา, ,/PDF/2486/A/004/171.PDF W585701 VOTO บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖[လင့်ခ်သေ], เล่ม 50 ตอนที่ ๔, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ (National Identification Card act, 1943)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းမှတ်ပုံတင်&oldid=669040" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။